Olole Nadaafadeed oo ka bilowday qaar ka mid ah waddooyinka Muqdisho – Radio Muqdisho
Olole Nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Muqdisho ayaa maanta ka bilowday wadooyinka waa weyn ee caasimadda.
Ololahan nadaafadeed oo ka soo socday inta u dhexeysa isgoysyada Jubba iyo KM4 ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay shaqaalaha dowladda Hoose ee Xamar iyo gawaari qashinka ka qaadayay wadada hareeraheeda, kuwaasi oo u taagan sidii ay u soo celin lahaayeen bilicdii ay Gobolka Banaadir lahayd.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Benaadir Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ololahan nadaafadeed uu yahay sidii qashinka looga qaadi lahaa waddooyinka caasimadda, isagoo shacabka ka codsaday inay arrimahaasi gacan ka geystaan.
Afhayeenka ayaa digniin u jeediyay ganacsatada jidka ku soo daadinaya qashinka
Tani ayaa qeyb ka ah dadaallada uu maamulka Gobolka Benaadir ugu jiro soo celinta bilicdii ay magaaladu lahayd.
Amniga Buuraleyda Galgala oo la xoojiyay